အမေးအဖြေများ - ကွမ်ကျိုး Focuslaser Co. , Ltd မှ
ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ: သင်ဘာပစ္စည်းကို process သလဲ? ( သာ. ကောင်း၏သင်၏ကုန်ပစ္စည်းရုပ်ပုံငါ့ကိုပြပါ) ပြုပြင်ဧရိယာကဘာလဲ?
ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာရှင်သည့်အချိန်တွင်မဆို, e-mail ကို / Skype ကို / ဖုန်းကို / ကုန်သွယ်ရေးမန်နေဂျာအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျသညျ, အကြှနျုပျတို့သညျကို manual စာအုပ်ပူဇော်နှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ကိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
နိမ့်ဆုံးအမိန့် 1 set ကိုစက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမိန့်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်, Thae စျေးနှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။
T / T, Western Union, L ကို A / C သို့မဟုတ်အခြားသူများ။
အကြီးစားထွင်းထုဖြတ်တောက်စက်တွေ, ကြှနျုပျတို့အားဖြင့်သမုဒ္ဒရာကုန်စည်တင်ပို့ရန်။ ကျနော်တို့လေကြောင်းရေကြောင်းအားဖြင့်အသေးစား၏ mini ကိုစက်မကယ်မလွှတ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ DHL, TNT, UPS, FedEx, အဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။ ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အသေးစိတ်လိပ်စာ, post ကိုကုဒ်စသည်တို့ကိုသိရှိကြကုန်အံ့။
လူအပေါင်းတို့သည်ဝါယာကြိုးများကောင်းစွာကွန်နက်ရှင်ဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ငါတို့နှင့်သင်၏လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်နှင့်ဆွေးနွေးချက်အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့, သန့်ရှင်းဖြစ်သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးနဲ့ကြေးမုံစောင့်ရှောက်လော့။